တရုတ် Ultrasonic ပျံ့, Ultrasonic မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့, Ultrasonic အနံ့ပျံ့ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:Ultrasonic ပျံ့,Ultrasonic မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့,Ultrasonic အနံ့ပျံ့,မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Ultrasonic ပျံ့
Ultrasonic ပျံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Ultrasonic ပျံ့, Ultrasonic မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Ultrasonic အနံ့ပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အမွှေးနံ့သာဆီ 200ml 220v ဗဓေလသစ်ပစ္စည်းအနံ့ပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမေဇုံသည်ကုန်ပစ္စည်း ၃၀၀ မီလီမီတာအနံမွှေးရနံ့ပျံ့နှံ့နေသည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့် Essential Oil အနံ့ဖန်ခွက်ပျံ့နှံ့ခြင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Glass Ultrasonic မြူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ Aromatherapy ပျံ့နှံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကောင်းဆုံး Mini Portable Ultrasonic Aroma Diffuser  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ 300ml လျှပ်စစ်ရနံ့ပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမေဇုံ Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကောင်းဆုံး Ultrasonic အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ultrasonic Aroma Air Humidifier မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြီးမားသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ (500ml)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရုံးခန်းအတွက် 24V 12W မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Timer နှင့်အတူ PP ABS 24V မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သစ်သားအစေ့ 500 ml မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ 500ml  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cool Mist နှင့်အတူအမေဇုံ Uk Ultrasonic ရေနံပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောစွမ်းရည် Cool Mist မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံရနံ့ကုထုံးပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ultrasonic Air ကို Humidifier မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရောင်စုံ Led အလင်းအနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံမြူပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cool Mist Humidifier Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကလေးသူငယ်များရင်သွေးငယ်များသည်အလုပ်သမားများအတွက် 80ML ရနံ့ကုထုံပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရီးရဲလ်ဝါးအကောင်းဆုံးရနံ့ကုထုံရေနံ Ultrasonic ပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကြီးစား ROOM တွင်များအတွက်မြှင့်တင်ရေးမရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမွှေးနံ့သာဆီ 200ml 220v ဗဓေလသစ်ပစ္စည်းအနံ့ပျံ့
အမွှေးနံ့သာဆီ 200ml 220v ဗဓေလသစ်ပစ္စည်းအနံ့ပျံ့ ရေအခိုးအငွေ့သည်တောအုပ်အတွင်းရှိမြို့၏ပြtheနာများမှလန်းဆန်း။ လန်းဆန်းမှုနှင့်တူသည်...
အမေဇုံသည်ကုန်ပစ္စည်း ၃၀၀ မီလီမီတာအနံမွှေးရနံ့ပျံ့နှံ့နေသည်
အမေဇုံသည်ကုန်ပစ္စည်း ၃၀၀ မီလီမီတာအနံမွှေးရနံ့ပျံ့နှံ့နေသည် ရနံ့ကုထုံးသည်ဂီတနှင့်အလင်းများကိုတွေ့သည့်အခါ၎င်းသည်သင့်အားအနံ့၊...
အရည်အသွေးမြင့် Essential Oil အနံ့ဖန်ခွက်ပျံ့နှံ့ခြင်း
အရည်အသွေးမြင့် Essential Oil အနံ့ဖန်ခွက်ပျံ့နှံ့ခြင်း တစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်၊ နေ့တိုင်းအစိုဓာတ်လိုအပ်သည်။ နွေ ဦး ရာသီ၌ဖုန်မှုန့်များများလာသည်။ ရေစိုစေသည့်အရာသည်လေကိုစိုစွတ်စေပြီးတိုးတက်စေသည်။...
Glass Ultrasonic မြူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ Aromatherapy ပျံ့နှံ့
Glass Ultrasonic မြူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ Aromatherapy ပျံ့နှံ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ aromatherapy စိုထိုင်းဆ, တိုင်းချိုမြိန်အခိုက်ခံစားပါ လန်းဆန်းစေသောအခိုးအငွေ့၊ PP သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရေတိုင်ကီ, အစားအစာတန်း PP ပစ္စည်း DC...
အကောင်းဆုံး Mini Portable Ultrasonic Aroma Diffuser
အကောင်းဆုံး Mini Portable Ultrasonic Aroma Diffuser Ultrasonic မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းလှိုနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ရေနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကို nano-scale မော်လီကျူးများအဖြစ်သို့ပြိုကွဲစေရန်အသုံးပြုသည်၊ ထို့ကြောင့် aromatherapy...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ 300ml လျှပ်စစ်ရနံ့ပျံ့
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၁၅၅ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 52.5 * 35.5 * 33cm / 12PCS
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ 300ml လျှပ်စစ်ရနံ့ပျံ့ ၁။ အတွင်းပိုင်းလေကိုလတ်ဆတ်အောင်လုပ်ပါ။ guests ည့်သည်များကိုလာရောက်လည်ပတ်ရန် the ည့်သည်များလာသောအခါ၊ သို့မဟုတ်အခန်းထဲရှိအနံ့ကိုသတိထားပါ၊ လေကောင်းလေသန့်သည် ultrasonic aromatherapy...
အမေဇုံ Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့
အမေဇုံ Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့ Wood Grain Aroma Diffuser သည်သယ်ဆောင်ရလွယ်သောဒီဇိုင်း၊ ရေအောက်ပုံသဏ္andာန်နှင့်ဘဝကိုနှစ်သက်သောအဆင့်မြင့်သူများအတွက်ဖက်ရှင်စတိုင်ဖြစ်သည်။...
အကောင်းဆုံး Ultrasonic အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
အကောင်းဆုံး Ultrasonic အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ [7 COLORS LAMP] ဒီအရောင်က ၇ ရောင်အရောင်ရင့်တဲ့အလင်းရောင်ရှိတဲ့ကလေးငယ်ဟာမှောင်မိုက်နေတဲ့ကြောက်လန့်မှုကိုနှုတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ အရောင် (၇) ခုကိုဖြတ်ပြီးအလင်းကိုအခမဲ့လည်ပတ်နိုင်သည်။ [SILENT &...
Ultrasonic Aroma Air Humidifier မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော 150ml Ultrasonic Aroma Diffuser အေးမြသောမြူသည်ကြာရှည်ခံသည်။...
အရည်အသွေးမြင့်ကြီးမားသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီဖြန့် 500ml အိပ်စက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အာရုံစိုက်ခြင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော။ သင့်ကိုအိပ်စက်အနားယူရန်၊...
ရုံးခန်းအတွက် 24V 12W မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
ရုံးခန်းအတွက် 24V 12W မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများဒီအေးမြအခိုးအငွေ့ပျံ့ထဲမှာရေနှင့်အတူထိုင်။ အလယ်ဗဟိုပတ်ပတ်လည်တီးဝိုင်းကွဲပြားခြားနားသောအရောင်7အကြားကွဲပြားနိုင်သည်။ ဒီတတ်နိုင်သောဖြန့်ဖြူးကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးခလုတ် ၂...
Timer နှင့်အတူ PP ABS 24V မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေကိုပျံ့နှံ့အနားယူဘို့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအကူအညီများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့ကို humidifiers အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။...
သစ်သားအစေ့ 500 ml မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ 500ml
သစ်သားအစေ့ 500 ml မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ 500ml ဒီ ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ aromatherapy များအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Multi-function ကိုကုသမှု gadget ကို။ ၎င်းသည် 500ml ပမာဏများစွာကိုသိုလှောင်ထားသဖြင့်ခဏကြာလျှင် ဆက်၍ လည်ပတ်နိုင်သည်။...
Cool Mist နှင့်အတူအမေဇုံ Uk Ultrasonic ရေနံပျံ့
Cool Mist နှင့်အတူအမေဇုံ Uk Ultrasonic ရေနံပျံ့ အားအပြည့်ရှိသောမြူ - မွှေးကြိုင်သောအနံ့ထွက်ရှိသည့်အမြှေးထွက်ရှိမှု၊ သင်၏အိမ်ကိုသင်အကြိုက်ဆုံးရနံ့များဖြင့်ဖြည့်ရန်သင်၏အကောင်းဆုံးအငွေ့အဖြစ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ LIGHT SHOW ကိုခံစားပါ -...
မြင့်မားသောစွမ်းရည် Cool Mist မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံရနံ့ကုထုံးပျံ့
မြင့်မားသောစွမ်းရည် Cool Mist မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံရနံ့ကုထုံးပျံ့ 5-IN-1 AROMATHERAPY DIFFUSER: ဒီ ultrasonic diffuser ဟာသင်အသုံးပြုဖူးသမျှနဲ့မတူဘဲထူးခြားတဲ့ multifunction aromatherapy ကိရိယာတစ်ခုပါ။...
ultrasonic လေထုစိုထိုင်းဆမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့ ဂန္ထဝင် Wood Grain Finish - သဘာဝသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားပုံသဏ္andာန်နှင့်ထူးခြားသောပန်းအိုးပုံစံဖြစ်သည်။ ဇင်ပုံစံရှုထောင့်နှင့်အတူသင်အနားယူစေသည်။ သင့်အခန်းကိုကောင်းစွာအလှဆင်ပါ။ 400ml...
ရောင်စုံ Led အလင်း အနံ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ မြူ D ကို iffuser3in 1 Functions: Ultrasonic ပျံ့နှံ့မှု ၊ Air Humidifier နှင့် LED mood light3တို့တွင်ဒီဇိုင်း တစ်ခုသည် အလွန်စိတ်အေးဆေးစွာအလုပ်လုပ်သောမွှေးသောအေးမြသောမြူကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။...
Cool Mist Humidifier Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 12.93 - 14.46 / Piece/Pieces
Cool Mist Humidifier Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့ Whisper Quietet - 30dB အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ရန် hydrokinetics ၏နိယာမကို အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ultrasonic...
ကလေးသူငယ်များရင်သွေးငယ်များသည်အလုပ်သမားများအတွက် 80ML ရနံ့ကုထုံပျံ့
ကလေးသူငယ်များရင်သွေးငယ်များသည်အလုပ်သမားများအတွက် 80ML ရနံ့ကုထုံပျံ့ ကုန်ပစ္စည်း Features: 1. Ultrasonic ပျံ့ပတ်ဝန်းကျင်လေထုပတ်ဝန်းကျင်၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်သုံးနိုင်တယ်,...
ရီးရဲလ်ဝါးအကောင်းဆုံးရနံ့ကုထုံရေနံ Ultrasonic ပျံ့
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 16.77 - 18.15 / Piece/Pieces
ရီးရဲလ်ဝါးအကောင်းဆုံးရနံ့ကုထုံရေနံ Ultrasonic ပျံ့ 1.Ultrasonic ပျံ့စွမ်းဆောင်ရည် - 280ml ။ 2.Bamboo ပျံ့ပစ္စည်း: ကို ABS + PP + ဝါး။ 3.Aroma ပျံ့အလုပ်အဖွဲ့အချိန်: 10 နာရီအထိ, သုံးအခိုးအငွေ့သည် Modes:3နာရီ,6နာရီ, စဉ်ဆက်မပြတ်...
အကြီးစား ROOM တွင်များအတွက်မြှင့်တင်ရေးမရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့
အကြီးစား ROOM တွင်များအတွက်မြှင့်တင်ရေးမရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့ feature: 1. Ultrasonic humidifier လေထု၏စိုထိုင်းဆတိုးပွါးခြင်းနှင့်မြေမှုန့်နှင့်ဘက်တီးရီးယားလျော့နည်းစေသည်။ သင့်ရဲ့အသားအရေ Moisturizing သင်တစ်ဦးသည် SPA ယူပြီးသောခံစားချက်များကိုပေးသည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ Ultrasonic ပျံ့ ပေးသွင်း
ရှန်ကျန်း Dituo အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd မှ။ Ultrasonic ပျံ့၏တရုတ်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, Ultrasonic မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့, ငါတို့သည်စသည်တို့ကို Ultrasonic အနံ့ပျံ့, မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့အတွက်အထူးပြုနေကြတယ်
လေထဲမှာအမွှေးအကြိုင်နှင့်ပြည့်ဝ၏သို့မှသာအဆိုပါ Ultrasonic ပျံ့ခြင်း, ultrasonic တုန်ခါမှုကိရိယာကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ high-frequency ကိုလှိုမှတဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်လေထုထဲတွင် 0.1-5 micrometer တစ်ဦးချင်းနှင့်အတူ nanometer-grade ကိုအအေးမိုဃ်းတိမ်သို့ရေမော်လီကျူးများနှင့်ဖျက်သိမ်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ dissipates ။ အဆိုပါမိုးလုံလေလုံလေထုခြောက်သွေ့ဆောင်းရာသီတွင်အပူပေးပွီးနောကျ, လူတွေဟာခြောက်သွေ့တဲ့နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့လည်ချောင်းခြောက်သွေ့ပါးစပ်ခြောက်သွေ့အသားအရေ, နှာခေါင်းသွေးထွက်များနှင့်အခြား "အပူခြောက်သွေ့တဲ့" ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိသည်လိမ့်မယ်, Ultrasonic မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ရေ atomize ဖို့နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်နှင့်စင်ကြယ်သော စက်ရုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ, အခန်းမြင့်မားသောစိုထိုင်းဆကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ရနံ့ကုထုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိနေချိန်မှာလေသန့်ရှင်းစေသဘာဝအနှုတ်လက္ခဏာအောက်စီဂျင်အိုင်းယွန်းများ၏အချို့သောပမာဏကိုထုတ်လုပ်နိုင်အောင်။
Ultrasonic ပျံ့ Ultrasonic မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Ultrasonic အနံ့ပျံ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ Usb Ultrasonic ပျံ့